Titi Koetin: Tena Zanak’i Saraha Izy
TANTARANY Vitany ny nanampy ny vadiny hianatra ny fahamarinana na dia nanohitra aza izy io.—Notantarain’i Mario Koetin, zanany lahy.
OLONA sariaka i Neny sady tia Baiboly. Tonga dia nanaiky hianatra Baiboly izy rehefa nihaona tamin’i Gertrud Ott, misionera tany Manado, any Sulawesi Avaratra. Lasa Vavolombelon’i Jehovah izy tatỳ aoriana. Nanohitra be anefa i Dada. Mpiasa ambony tao amin’ny banky izy ary lasa mpitantana ny Foiben’ny Fanakalozam-bola teto Jakarta.
Norahonan’i Dada i Neny, indray andro izay.
Nibetroka izy hoe: “Fidio izay tianao: Na ny fivavahanao na izaho!”
Nieritreritra elaela aloha i Neny vao namaly moramora hoe: “Samy tiako na ny vadiko na i Jehovah.”
Tsy nahateny i Dada ary nisinda ny hatezerany.
Nihanilefitra i Dada rehefa nandeha ny fotoana. Tiany be mantsy i Neny sady tsy foiny satria marani-tsaina.
Tian’i Neny anefa raha miaraka aminy manompo an’i Jehovah i Dada. Rehefa nivavaka momba izany izy, dia lasa tadidiny hoe tia mianatra fiteny vahiny i Dada. Nasiany taratasy nisy andinin-teny tamin’ny teny anglisy àry eran’ny trano. Dia hoy izy: “Miezaka manatsara ny fahaizako teny anglisy aho.” Fantany koa hoe zava-dehibe tamin’i Dada ny resaka kabary, ka nasainy nanampy azy hamerina ny anjara sekoliny izy. Nekeny izany. Hain’i Neny hoe tia mandray vahiny i Dada, ka niera taminy izy raha afaka mandray mpiandraikitra ny faritra ry zareo. Nekeny koa izany. Fantatr’i Neny fa tena tian’i Dada ny ankohonany, ka nanontaniany izy raha te hamonjy fivoriambe miaraka aminay. Dia nandeha izy.
Malina sy nanam-paharetana i Neny sady niezaka mafy, ka niova tsikelikely i Dada. Namonjy fivoriana izy rehefa nifindra tany Angletera izahay. Lasa mpinamana izy sy John Barr, ilay lasa anisan’ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Natao batisa izy tamin’io taona io, ka tsy omby tratra ny hafalian’i Neny. Tsy nataony ory fitiavana mihitsy i Neny, nandritra ny taona maro taorian’izay.
Nadio fitondran-tena i Neny, tia nanaja olona, ary tena tia an’i Jehovah. Nampiaiky an’ireo nahalala azy izany
Nisy namanay nilaza hoe nitovy tamin’i Lydia, ilay vehivavy tamin’ny taonjato voalohany, i Neny satria tia nandray vahiny. (Asa. 16:14, 15) Izaho kosa mahita hoe hoatran’i Saraha vadin’i Abrahama izy, satria tena tiany ny nanaiky ny vadiny. (1 Pet. 3:4-6) Olona nadio fitondran-tena i Neny, tia nanaja olona, ary tena tia an’i Jehovah. Nampiaiky an’ireo nahalala azy izany. Ny modely nomeny no nahatonga an’i Dada hanaiky ny fahamarinana. Tena zanak’i Saraha izy, araka ny hevitro.
Lazaina fa mampisara-bazana fianakaviana ny Vavolombelon’i Jehovah indraindray. Tena avy amin’ilay mpianakavy Vavolombelona tokoa ve anefa ny olana?